ချစ်ရသူပြန်လာရန် Santa Muerte သို့ဆုတောင်းပါ။ ? အစွမ်းထက်သည်
Santa Muerte ထံချစ်ရသူပြန်လာရန်ဆုတောင်းပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်၏တောင်းဆိုချက်များစွာအတွက်သင်အဖြေများကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ဘ ၀ ထဲမ ၀ င်ခင်သို့မဟုတ်သင်၏လမ်းကိုမကျော်လွှားနိုင်သူသည်ချစ်မြတ်နိုးသူကိုချစ်မြတ်နိုးသူသည်လာမည့်သူသို့မဟုတ်သူ၏ဘဝတွင်သင့်ကိုရရှိရန်သန့်ရှင်းသောသေခြင်း၏လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူနိုင်သည်။
လူတစ် ဦး အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသောအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအစွမ်းထက်သောဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကိုက်မြန်ဆန်ထိရောက်သောနည်းဖြင့်အကူအညီရရန်လိုအပ်သည်။
သင်ယုံကြည်နိုင်တယ်၊ ဒီဆုတောင်းချက်ကအရမ်းတန်ခိုးရှိတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပါ။
1 ချစ်ရသူပြန်လာရန် Santa Muerte အတွက်ဆုတောင်းချက်ကဘာလဲ။
2 ချစ်ရသူကိုပြန်ပေးရန် Santa Muerte သို့ဆုတောင်းပါ
4 ထိပ်ဖျား: ချစ်ရသူကိုပြန်ပေးရန် Santa Muerte ထံဆုတောင်းပါ
အတွက်အိုကဘာလဲချစ်ရသူပြန်လာနိုင်အောင် Santa Muerte သို့ခွဲတမ်း?
ဆုတောင်းချက်များသည်အစေခံဖြစ်သည် သင်လိုအပ်သမျှအတွက်, တောင်းခံခြင်းသည်အနာပျောက်စေသောသို့မဟုတ်စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သော်လည်းအတွင်းစိတ်ငြိမ်သက်မှုရရန်ဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်နိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပဌနာအဘို့ဖြစ်၏ အချစ်ရ သို့မဟုတ်သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးမှာဆုတောင်းခြင်းသည်အရာရာတိုင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသိရန်ဖြစ်သည်။
Santa Muerte ထံဆုတောင်းခြင်းသည်မက္ကဆီကိုရှိ Aztec အနွယ်တွင်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ သို့သော်ယနေ့အထိ၎င်းအား၎င်း၏စွမ်းအားနှင့်ထိရောက်မှုကြောင့်မွေးစားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
ချစ်ရသူကိုပြန်ပေးရန် Santa Muerte သို့ဆုတောင်းပါ
Santa Muerte၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရသောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏မိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်၏ ၀ မ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုပြောပြရန်သင်၏ခြေထောက်ပေါ်ဒူးထောက်လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်ကိုနားထောင်ရန်ကျွန်ုပ်ထံတောင်းဆိုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များသည်ကျွန်ုပ်ချစ်သောသူအပေါ်တွင်သန့်ရှင်း။ တည်ကြည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်မရှိခြင်းကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည် (သူ၏အမည်ဖော်ပြပါ) ငါ့ဘက်သို့ရောက်စေခြင်းငှါငါသည်အားထုတ်မည်။
ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းသံကိုနားညောင်းတော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်၏နက်နဲသောအရပ်မှလာ။ ၊
ငါကတိပေးမယ် (ကတိက ၀ တ်ပြုသည်) ငါမဆိုင်းမတွဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။
ဒီကိုညွှန်ကြားထားသော Santa Muerte ဆုတောင်းပဌနာ အထူးသဖြင့် Santa Muerte Roja ဖြစ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှုသည်ပတ္တမြားနှင့်ပြုလုပ်ထားသောဝတ်လုံနှင့်အတူတကွကိုယ်စားပြုသည်။
သူမသည်ခံစားချက်များ, ချစ်ခြင်း, ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောတောင်းဆိုမှုများကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသီးများ၊ ပန်းများ၊ သကြားလုံးများသို့မဟုတ်အရက်များဖြစ်နိုင်သည့်အချို့သောပူဇော်သကာများပါ ၀ င်သောကောင်းမွန်သောမီးမွှေးသည့်ယဇ်ပလ္လင်ကိုပြုလုပ်ရန်အကြံပေးသူများရှိပါသည်။
Santa Muerte ကိုချစ်မြတ်နိုးရသူကိုပြန်ပေးပါရန်ဆုတောင်းခြင်းသည်ဤယဇ်ပလ္လင်ရှေ့တွင်ခုနစ်ရက်နှင့်ဤအချိန်ကာလကုန်ဆုံးချိန်တွင်အံ့ဖွယ်အမှုဖြစ်ပျက်ရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ထိပ်ဖျား: ချစ်ရသူကိုပြန်ပေးရန် Santa Muerte ထံဆုတောင်းပါ
Santa Muerte ၏ပုံရိပ်ရှေ့တွင်အနီရောင်ဖယောင်းတိုင် ၇ ခုမီးခွက်ထွန်းပါ။ သင်အောင်မြင်လျှင်သန့်ရှင်းသောသေခြင်း၏ရုပ်ထုရှေ့တွင်ဖယောင်းတိုင်များကိုထွန်းပါ။
သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီဓလေ့ထုံးစံစဉ်အတွင်းကသင်၏ဂတိတော်ကိုစေ။ ဖယောင်းတိုင်များထွန်းရန်သို့မဟုတ်အခြားကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်ကတိပေးနိုင်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်သင်၏ဆုတောင်းခြင်းသည် ပို၍ မြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ လိုအပ်သောအကူအညီအားလုံးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းဖြင့်ရရှိလိမ့်မည်။
မဖြစ်နိုင်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် Santa Muerte ထံဆုတောင်းပါ
တန်ခိုးကြီးသောစိန့် Cyprian အတွက်ဆုတောင်းပဌနာ